Sei bvudzi richikura kumusana uye nzira yekuabvisa | Stylish Men
Sei bvudzi richikura kumusana uye kuti ungabvisa sei
Alicia tomero | 21/05/2022 11:28 | Akaveurwa, Kuchengetwa kwega
Iwo canons erunako muvarume ari kuwedzera kugadziridzwa kune akasimba maprotocol ane dingindira re bvudzi remuviri. Kuti murume anonzwa kudzvinyirirwa nebvudzi rakazara kumashure hazvirevi kuti haapindi mune chimwe chinhu chinomanikidzirwa, asi zvechokwadi anoda kuziva nei bvudzi richikura kumusana uye kuti ungadzibvisa sei
mhinduro kune dzakawanda uye zvinenge zvese zvinopihwa ndezvenguva pfupi. Kubviswa kwebvudzi laser chete ndiko kwaizoguma nevhudzi mune chero chikamu chemuviri mukufamba kwenguva. Asi nzira yekurapa yega yega haienderane nebhajeti raunoda, kana nevimbiso yekutaura kuti haizotamburi zvishoma.
1 Sei bvudzi richimera kumusana?
2 Nzira yekubvisa sei bvudzi kumusana
2.1 Kuveura ndebvu
2.2 Dhirairi yekudzora
2.4 laser kubvisa bvudzi
Sei bvudzi richimera kumusana?
Varume vanowanzova nevhudzi rakawanda kupfuura vakadzi nekuda kwekuwanda kwe testosterone, hormone inokanganisa kukura kwebvudzi. Varume vazhinji vanotambura nebvudzi rakanaka, kana gobvu, zvichienderana nemajini ako. Asi chine chokwadi ndechekuti vanogona kuita kunge hypertrichosis, chirwere chinotapurwa kubva kupi bvudzi rinogona kukura zvakanyanya, kusanganisira musana.
Vakadzi vanotamburawo neimwe pathology inonzi hirsutism, kwavanotamburawo a kukura kwebvudzi zvakanyanya munzvimbo dzakawanda dzomuviri wake, kunyange kuva imwe yenzvimbo idzo musana. Hirsutism inowanzova chiratidzo chechirwere chikuru kana chiratidzo chekusagadzikana.
Vakadzi vanogona kutambura nepolycystic ovary, gomarara re<em>ovarian, hyperthecosis (kuwedzera kubudiswa kwe<em>ovarian ), bundu muadrenal glands, Cushing’s syndrome (yakawandisa corticosteroids) kana kunwa mimwe mishonga inobudisa ma<em>hormone echirume. Zvose izvi zvinokanganisa kuva nebvudzi. Kashoma kuti vatore kumusana, asi zvinogona kudaro.
Nzira yekubvisa sei bvudzi kumusana
Vakadzi vanogona kuderedza bvudzi ravo nekuita kutarisirwa kwezvokurapa uye kurapa dambudziko rako rehomoni nerubatsiro rwe endocrinologist kana gynecologist. Kune rumwe rutivi, unogonawo kuderedza bvudzi rakawandisa nekushandisa a cosmetic kana laser kurapwa.
Varume vanokwanisa zvakare kuita utariri hwekurapa kana paine chero rudzi rwe hormonal kana endocrine kusagadzikana. Nekudaro, semuzviitiko zvakawanda, zvichave zvakafanira kutendeukira kune kurapa kwekunaka kubvisa bvudzi rinoonekwa.
Iyo iri nyore, inokurumidza uye isingarwadzi system. Iwe unozoda rubatsiro rweumwe munhu kuti akubatsire kubvisa bvudzi kubva munzvimbo dzese dzausingakwanise kusvika. Nzira yakanaka yekutanga ndeyekucheka vhudzi rose gobvu uye gobvu nerubatsiro rwechigero.
Kuongorora kwakanakisisa kunogona kuitwa gare gare nerubatsiro rwe muchina wekuveura ndebvu iyo ine akawanda cutouts mumusoro wayo set. Ramba uchifunga kuti kuveura nebadza haina kuomesa zvachose bvudzi kumusana. Kuveura kwechokwadi kunowanikwa nemucheka uye nokuda kweizvi kunofanira kuitwa nenzira imwechete iyo kuveura kunowanikwa pachiso.
tichawana kugera gel kana furo uye uvhare musana wose nekrimu. Ipapo isu tichawana kuveura nekutsvedza blade kurwisa kutungamira kwebvudzi, hongu, zviri nani nerubatsiro rweumwe munhu uye pedyo nedhishi kuti uchenese blade pane imwe neimwe wongororo.
Zvinokurudzirwa kugeza mushure mekuveura kubvisa chero bvudzi rakasununguka. Ipapo iwe unofanirwa kupuruzira nzvimbo yacho yakaoma kuti urege kuitsamwisa zvakanyanya uye kuzora mafuta anonhuwirira-asina kunhuwirira kunyaradza zvinobvira kutsamwa.
Icho chimwe chimiro chekubvisa bvudzi, kupi vhudzi rinokurumidzirwa nenzira imwechete yekuveura ndebvu. Mafuta aya ane makemikari anoita pakeratin yebvudzi uye anoita kuti riparadzwe. Iro cream inoshandiswa kune ganda rine mvere, rakasara kuti riite maminetsi mashomanana uye ipapo Inobviswa nemaoko nerubatsiro rwe spatula. Nemhando iyi yekuveura bvudzi rinotora nguva shoma kuti ribude uye senguva dzose zviri nani kuwana mumwe munhu kuti akubatsire nekuveura.
Waxing inzira iri nyore, asi nedambudziko rekuti zvinogona kurwadza zvakanyanya, kune vanhu vasingakwanisi kutakura kubviswa kwebvudzi. Chokwadi chiri mukufarirwa ndechekuti bvudzi richatora nguva yakareba kuti ribude.
laser kubvisa bvudzi
Ndiyo nzira yakanakisisa yekugumisa bvudzi remuviri. Mushonga unodhura uye zvinotora mwedzi yakati wandei yekurapa kumisa bvudzi kumera kumashure. Iyo laser ichashandiswa kune iyo nzvimbo kuti iparadze bvudzi follicles uye kurambidza kana kunonoka kukura kwebvudzi. Muzviitiko zvakawanda, kubviswa kwebvudzi re laser kunowanzo shanda zvakanyanya, asi mune dzimwe nguva chirongwa chekugadzirisa chinodiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kuchengetwa kwega » Sei bvudzi richikura kumusana uye kuti ungabvisa sei